February 2020 - Page 4 of 4 - Puntland Mirror Believable Media Website
February 5, 2020 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Maleeshiyada ISIS ayaa sheegatay masuuliyada dilka labo askari oo katirsanaa ciidanka booliiska Puntland, sida ay tabisay warbaahinta Acmaaq oo ku hadasha afka ISIS. Dilka ayaa ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso Talaadadii, iyadoo kooxda […]
February 4, 2020 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa ka codsatay boliiska caalamiga ah ee Interpol xirista wasiirkii amniga maamul goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay ciidanka booliiska Dowladda Federaalka Soomaaliya. “Dowladda Federaalka Soomaaliya […]
February 3, 2020 Puntland Mirror 0
Kismaayo-(Puntland Mirror) Milatariga Mareykanka ayaa duqeyn ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab ka fuliyay deegaanka Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe, sida Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ay ku sheegeen war-saxaafadeed. Duqeynta oo dhacday Axadii ayaa waxaa […]
Somalia declared the worst desert locust invasion in a quarter-century a national emergency that’s posing a major threat to an already fragile food situation. Swarms of the insects are breeding in Djibouti, Eritrea and Sudan […]
February 2, 2020 Puntland Mirror 0
Dhuusamareeb-(Puntland Mirror) Xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka Galmudug ayaa Maxamed Cabdi Kaariye u doortay madaxweyne cusub maanta oo Axad ah, sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Nuur Gacal. Maxamed Cabdi Kaariye oo loo yaqaan Qoor […]
February 1, 2020 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan labo qof ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho maanta oo Sabti ah. Qaraxa oo ahaa miino dhulka lagu aasay ayaa ka dhacay xaafada Xoosh, waxaana lala eegtay guddoomiye […]
Garowe–(Puntland Mirror) The interim mayor of Garowe city, Mr Ahmed Mohamed Du’ale, has ruled out running for mayor in the upcoming district council elections, as confirmed to Puntland Mirror by credible sources close to the [...]